DAAWO:Somaliland oo Qaylo afka furatay, Qorshe halis ah oo socda & Dhismaha maamulka Sool Iyo Sanaag oo IGAD….
December 7, 2019 Mahad Jama 5
HARGEYSA(P-TIMES)- Kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen warar sheegaya in deegaanada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle loo dhisi doono maamul u gaar ah isla markaasna la midayn doono maamuladda Khaatumo iyo Maakhir oo ka kala jira deegaanadaasi ayaa waxaa ka hadlay arimahaasi gudoomiyaha Xisbiga Mucaaridka Somaliland ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe.
Eng. Waraabe oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegay in magaalada Addis Ababa uu kulan ku dhex maray gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Puntland C/xakiin Maxamed Dhoobo Daareed, safiirka dowladda Soomaaliya u qaabilsan Ethiopia C/xakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camay iyo wakiilka dowladda Turkiga qaabilsan wada hadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland, isagoona sheegay Mr. Waraabe in dhinacyada kulankaasi uu u dhaxeeyey ay ku heshiiyeen kala jarista Somaliland.
Waxa uu sheegay Eng. Faysal Cali Waraabe in magaalada Addis Ababa laga wado dhismaha maamulo cusub iyo in deegaanadaasi loo sameeyo maamulo u gaar ah isla markaasna Khaatumo iyo Maakhir laga soo ansixin doono Urur goboleedka IGAD.
“Waxaa halkaa laga wadaa in la sameeyo wax la yidhaahdo Maakhir State oo ah Sanaag iyo Khaatumo oo ah Sool, Sanaag iyo Cayn taas iminka IGAD laga soo ansixinayaa” Ayuu yidhi Eng. Faysal Cali Waraabe.
Isaga oo hadalkiisa sii wata Eng. Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in safiirka dowladda Soomaaliya ee Ethiopia Eng. Camay in uu hore u casuumay qaar kamid ah Salaadiinta goboladda Awdal iyo Sanaag iyo agaasimaha hay’adda NISA ee dowladda Soomaaliya Fahad Yaasiin isla markaasna haatan uu socdo qorshihii lagu kala jar jari lahaa Somaliland.
Waxa uu ku baaqay in la beeniyo arimahaasi, walowse arimahan haatan taagan uu ku sababeeyey khilaafka u dhaxeeya Xisbiyada ka jira Somaliland oo uu sheegay in lagu mashquulay halkii wax laga qaban lahaa kala jar jarka lagu wado Somaliland.
Somaliland ayuu sheegay in ay ka maqan tahay saaxada guud ee Caalamka, isagoona shaaca ka qaaday in guud ahaanba hada aysan jirin dowladd taageersan Somaliland si looga yareeyo culaysyada xoogan ee saaran halka dhalinyarada uu ugu baaqay in ay wacyi galin ka sameeyaan arimahaasi.
Cid kasta waxay xaq u leedahay in ay ayatiinkooda ka tashadaan. Laakiin waxaa loo baahan yahay in lagu wajaho maskax iyo maan caafimad qaba. Caro waxii loo sameeyo caqabadeeda ay yeelataa. Guri lagama dhisto Tog biyo mareen ah.
Tolow magacee loo bixin doonaa maamulkaas. Waxaa la dhisanayaa wadan aan xaataa magacii loo bixin la hayn. Magacee se puntland loo bixin hadii labadaas gobol ka go’aan. Waxaan u maleyn in waxkasta asalkeedii ku noqonayso oo magaca puntland meesha ka baxayo oo Majeertenia soo noqonayso.
Nacaskaan yaa wax u sheega, Puntland wey jireysaa, nin qabiilmadaxa qabiilna kukakamarayayaad tahayee jirran, allaha ku caafiyo. qabiilna kuma dhisna, cidii wax soo kordhineysa iyo maamula kare ,dadku waa xor.
Waxaad dooto qor oo gaduuda ,geed dhintay, ee caaqiba lahayn baad tahay ee runta diida, Fouk.
Waxaan ahay qabiili laakiin qabiileyste ma ihi. Mana jir-rani oo cuqdad’na ma qabo waayo awooweyaal fir dheer ayaan kasoo farcamay. Somaali waa qabaaiilo oo maskax qabiil iyo maamul qabiil ayey fahmaan. Qabiil cudur ma aha, ee qabyaalada ayaa cudur xun ah. Somaali’na waxaan qabiil ahayn laguma daaweyn karo. Daacuun waxaa looga hortagaa talaal laga sameeyey daacuun. Markaan arkay sida aad wax uu qodhay wey iska muuqataa in aad kala garanahayn faraqa u dhexeeya qabiil iyo qabyaalad. Cida rabta in ay puntland burburiso ama kala qoyso, qabyaalad ayaa wada oo hagaysa. Hadii majeerteen kali ku noqdaan puntland maxaa u diidaya in ay aayahooda ka tashadaan oo asalkooda ku noqdaan oo majeerteenia soo nooleeyaan. Mise waxaad mooday markii aan Deni duro in aan qabyaalad ka urinayo. Badankood hogaamiyaasha somaaliyeed waxaa haadaan ka tuura ehelka soke ee ay muciinka bidaan oo ay gaashaanka ka dhigtan. Waxaa Tusaale ah adiga oo Demi difaacaya. .
Qabiili ma tihid, ee qayaaleyste ayaa tahay. Nin aan qabiil lahayn ama kiisa inkira waa ey aan sumad lahayn oo la aamini-karin. War ninkaas maskiinka(Deni) ah ,waxuu reer puntland oo dhan u yahay madaweyne, marka qar iyo haadaan haka tuurina.